Toliara: jiolahy telo voasambotra, roa lavon’ny balan’ny polisy | NewsMada
Toliara: jiolahy telo voasambotra, roa lavon’ny balan’ny polisy
Par Taratra sur 24/11/2018
Nifandona ny jiolahy sy ny polisy tany Toliara. Maty voatifitra tamin’izany ny roa tamin’ireo jiolahy ary telo tratra. Manao antso amin’ny olona hatrany amin’ny fanomezana vaovao ny polisy.
Nifanesisesy tato ho ato ny asan-jiolahy mitam-piadiana tany Toiara. Jiolahy telo no voasambotra ary ny roa lavon’ny balan’ny polisy tany an-toerana. Ny alahady teo, tokantrano telo no notafihan’ny jiolahy efatra tao amin’ny fokotany Ambalanomby, ka olona telo no tratra ary ny iray tafaporitsaka taorian’ny fifanejehana tamin’ny polisy. Ny atalata alina indray, jiolahy iray teo ampanatanterahana ny asa ratsiny tao amin’ny fokontany Tsimenatse no lavon’ny balan’ny polisy raha tafatsoaka ny faharoa.
Ny Alakamisy indray, jiolahy iray indray no maty voatifitry ny polisy teny amin’ny fokontany Mahavatse 2 akaikin’ny Don bosco izay nifanehitra taminy polisy mpanao fisafoana amin’ny alina izay naheno ny antso vonjin’ny mponina teny an-toerana. Mbola tratra teny aminy ny basy vita gasy nifampitifirany tamin’ny polisy. Samy nahatonga ny fitoriana teny amin’ny polisy ireo olona voatafika ka vesatra maro no anenjehena ireto voasambotra ireto toy ny famakiana trano sy fanolanana ary fitifirana ireo olona efatra tamin’io tokantrano io izay marihina fa avotra daholo ny ain’ireo olona ireo rehefa nahazo fitsaboana sahaza azy tao amin’ny hopitaliben’i Toliara. Marihina fa fifarimbonan’ny polisy tao Toliara no nahatrarana ireto jiolay ireto . Tao ny avy ao amin’ny FIP sy ny kaomisaria foibe sy OPJ misahana ny famotorana ireto mpanao ratsy ireto.
Araka izany, manao antso avo izy ireo mba ho malina ny mponina ka hampandre ny polisy raha misy fisehoan-javatra hafahafa eny amin’ny fokontany. Amin’izao fotoana manakaiky ny fety izao no mampirongatra ny asan-jiolahy mitam-basy.
CMS sy Yves S.